Chii chinonzi Medicare kubiridzira-uye kuti ungarwisa sei (kana kuzivisa) - Kambani | Chikunguru 2021
Zvinodhaka Vs. Shamwari Kambani Nharaunda, Wellness Checkout Hutano Dzidzo, Hutano Hutano Dzidzo, Nhau Nharaunda, Kambani Wellness Zvipfuwo Nhau, Wellness Dzidzo Yehutano Info Info, Nhau Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Kambani, Info Info Dhinda
Kuru >> Kambani >> Dzidza kuti chii chinonzi Medicare kubiridzira-uye kuti ungazvichenjerere sei
Dzidza kuti chii chinonzi Medicare kubiridzira-uye kuti ungazvichenjerere sei
Medicare kubiridzira , fomu yeinishuwarenzi kubiridzira, ndeipi mhando yemutemo asiri wepamutemo yekugamuchira mubatanidzwa wehutano hwekubatsira kuti uwane pundutso. Inogona kutora mafomu mazhinji. Uye, kwete, uchishandisa kadhi rekuchengetedza chemishonga yezvinyorwa hazvisi chimwe chazvo.
Kubiridzira kweMedare kunoitika mubhodhi rese - kubva kuna vanachiremba, zvipatara, marabhoritari, kusvika kune vanowana rubatsiro vanotengesa manhamba avo kana kupa makadhi avo kune vamwe, anodaro Charles Clarkson we Senior Medicare Patrol yeNew Jersey .
Chii chinomirira Medicare kubiridzira?
Kune vanopa, zvinogona kuva:
Kuendesa zvirevo zvenhema
Kumiririra zvisizvo ruzivo nezve zvirevo zvehutano
Kukumbira kana kubhadhara chiokomuhomwe kuti uendeswe kune masevhisi akadzorerwa neMedicare
Kana zvikaitwa nevatapi, Medicare kubiridzira kunogona kubhadharisa mamwe kana anodhura masevhisi pane anotambirwa nemurwere, kubhadharisa nguva dzakatarwa, kutengesa-kutengesa varwere pamabasa asina kukodzera kumabhadharo epad, kana kubhadhara kuendeswa kwevarwere veMedare.
Kune vanobatsirwa zvinogona kuva:
Kurega vamwe vachishandisa kadhi rako reMedicare
Kukumbira mishonga kana masevhisi ausingade, wozoapa kana kuatengesa kune mumwe munhu
Kuve wakabatwa neMedicare scam
Vamwe vanobatsirwa vanotengesa makadhi avo eMedare kana nhamba dzekuzivikanwa. Kunyanya kazhinji, vanobatsirwa vanova vanobatwa nehurongwa hwekunyepedzera nevechitatu-bato. Anobiridzira anogona kushandisa yakaba nhamba yeMedare kuti arayire masevhisi kana zvishandiso-senge ibvi brace-pasina nhengo kuziva. Kana, munyengeri anogona kumira semumiriri weMedare, kugutsa nhengo kuti irayire sevhisi, obva abhadharisa Medicare. Chimiro chazvino chiitiko cheDNA yekuyedza scam. Vanyengeri vanoita mari nekukurumidza nekuita kuti vanobatsirwa vanyorese mahara magene ekuyedza vana, vobva vabhadharira Medicare, sekureva kwaClarkson.
RELATED: Chii chinonzi Medicare 'donut hole'?
Zvirango zveMedicare kubiridzira
Medicare kubiridzira hakubvumirwe uye kunofungidzirwa kunge mhosva. Chero ani zvake anozviita anogona kutarisana nemhosva, mhosva, kana hutongi mhedzisiro inosanganisira nguva yejeri, faindi, kana chirango - sekurasikirwa nemarezinesi ekurapa kana kubviswa mukutora chikamu muzvirongwa zveFederal zvekuchengetedza hutano.
Medicare kubiridzira kunokuvadza munhu wese. Kubiridzira kweMedicare kunoba madhora emitero ari kubuda muhomwe dzeAmerica dzese, akadaro mupurisa wezvematongerwo enyika Shimon Richmond mune vhidhiyo AARP . Inobira pachirongwa icho chiri kupa masevhisi ayo maAmerican ese netariro achakwanisa kutora mukana, kana angangoda pane imwe nguva. Iyo inopfuudzwa kune vagari muchimiro chemitero yakakwira kubhadhara chirongwa ichi, uye inogona kukonzeresa kudzikira kwemasevhisi evatori vechikamu sevatariri vehurongwa vanocheka zvirongwa zvekubhadhara kukwira kwemitengo.
Nzira yekudzivirira Medicare kubiridzira
Chengetedza ruzivo rwako rwehutano. Usagovana yako Medicare nhamba, zvinyorwa zvekurapa, kana Social Security nhamba kune chero munhu kunze kwevanozvipa, vanozvida nekuda kwekubhadharisa. Medicare.gov inoti iwe unofanirwa kubata yako Medicare kadhi senge iri kiredhiti kadhi. Zvichireva, iwe haudi kuti vamwe vanhu vabire nhamba yako yeakaundi uye voshandisa ivo pachavo kurapwa kwavo. Clarkson anokurudzira kusiya kadhi rako reMedicare kumba, kunze kwekunge iwe uchiziva kuti ucharida. Unongofanira kuenda nayo chete kana uchienda kuna chiremba kana kuchipatara, anodaro.
Zvidzidzise. Dzidza nezvekuti chirongwa chako cheMedare chinoshanda sei — chii chinogona kubhadhariswa kuMedare, izvo zvisingakwanise kubhadharirwa kuMedare, mabasa akafukidzwa, uye mutengo. Tsvaga nei chiremba wako kana mumwe mutengesi ari kukurudzira mamwe masevhisi.
Chenjera uye bvunza mibvunzo. Kana ichiita seyakanyanya kunaka kuti ive yechokwadi, ingangove isiri iyo kumusoro-uye-kumusoro. Mari kana zvipo mukutsinhana kurapwa kwemahara zvinogona kunge zviri chiratidzo chekubiridzira kana musina kutendeseka wezvehutano. Kana mupi achipa kubhadharira sevhisi isingawanzo kuvharwa, tsvaga kuti sei — kana kuti sei — inobhadharwa sei muchiitiko ichi. Inogona kunge iri yekunyepedzera kuda kune rakasiyana sevhisi.
Chengetedza zvinyorwa zvehutano zvakangwarira. Tevera pawakashanyira hofisi yechiremba, uye nemiyedzo ipi yawaive nayo pakushanya kumwe nekumwe. Nyora zvinyorwa pane zvakaitika pakushanya kwega kwega mumagazini yezvokurapa. Kana chirevo chako chasvika, tarisa kuti uve nechokwadi chekuti zvese zvese zviri zvechokwadi. Kana iwe ukazadza mushonga, ita shuwa kuti ndeyemushonga wakaringana uye huwandu hwemapiritsi, uye nekumhan'arira chero matambudziko kumufarisi.
Usadonhedze zveMedicare zvitsotsi. Medicare haitumire vamiririri kumba kwako, saka kana mushambadzi wemba neimba akamira neimba yako kana imba, uri pachokwadi kuva unofungira. Vamiririri vanongokusheedza iwe kana uchinge watove nhengo yehurongwa, kana kana wakasiya meseji. Kana iwe usina chokwadi kana kufona kuri kwekubiridzira, unogona kugara uchingorembera uye kufona zvakare kune hotera yeMedare yekushandira vatengi pa1-800-MEDICARE.
Nzira yekuziva sei Medicare kubiridzira
Enzanisa zvirevo zvako zveMedicare kune ako marekodhi ehutano. Tarisa zvikanganiso kune vanopa, masevhisi akapihwa, kana mazuva ebasa. Wakanga uri kwachiremba zuva iri here? Wakawana muyedzo here?
Kana chirevo ichi chisingaenderane nejenari yako, inogona kunge iri yekukanganisa kwechokwadi kwekubhadhara. Kana, Medicare inogona kunge yakabhadhariswa kurapwa kwausina kugamuchira. Fonera waunopa, uye vabvunze kuti vatsanangure kusawirirana.
Ndinozivisa sei Medicare kubiridzira?
Kana iwe uchifunga kuti unogona kuve wakabatwa nechitsotsi cheMedare, bata nharaunda yako Senior Medical Patrol (SMP), sangano repasirese rakazvipira kuchengetedza vanowana kubva mukubiridzira. Kunyangwe iwe usingazive kana hunyengeri, ingotidaidza isu, Clarkson anodaro. Ngatitungamirire iwe. Haasi munhu wese anoziva kuti chitsotsi chii; Medicare yakaoma. Kunyangwe zvisiri zvekunyepedzera, tinogona kuisa pfungwa dzako nyore.
Yadzo yepasirese, nhare-yemahara hotline inokubatanidza iwe neako SMP yemuno, ingo daidza 877-808-2468.
Pamusoro pezvo, unogona kuzivisa kubiridzira kwemishonga nekubata Medicare kana hurumende zvakananga ne:
Kufona 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
Kufonera hofisi yaInspector General pa1-800-HHS-MAZANO (1-800-447-8477)
Kufaira iyo online chichemo
Usati wafona, kana kugadzira chichemo, ita shuwa kuti waunganidza zvese ruzivo iwe rwaunowana nezve sevhisi iwe yauri kubvunza-zuva, mupi, huwandu, zita rako, nhamba yako yeMedare, uye chikonzero chaunofunga kuti Medicare inofanira kunge iri kubhadharisa.
Nhungamiro yemubereki kune strep huro muvana
Iyo yakaderera pasi pane laxatives
maitiro ekuti usatore mbiriso hutachiona uchinge uri pamishonga inorwisa mabhakitiriya
ndeipi iri renji yakajairwa yekuyedzwa shuga yeropa
ko shuga yako yeropa inofanira kunge yakaita sei
chii chinoitika kana ukanwa mapiritsi akapera
zvakanaka here kusanganisa tylenol uye kuraira